Otu esi etinye Foxit PDF Reader na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Foxit PDF Reader na AlmaLinux 8
October 11, 2021 October 11, 2021 by Jọshụa James
Budata Foxit Reader
Wụnye Foxit Reader
Otu esi ebido Foxit PDF Reader
Foxit Reader Reader bụ a free multi-ikpo okwu PDF agụ maka Linux, MacOS na Windows. Onye na-agụ PDF bụ obere, ngwa ngwa, yana njiri mara PDF Reader iji lelee, kọwapụta, dejupụta ma binye aka na akwụkwọ PDF. PDF Reader na-ejikọta ngwa ngwa na ECM na nchekwa igwe ojii na-ewu ewu.
Na ngwụcha nkuzi a, ị ga-ama ka esi etinye Foxit PDF Reader na AlmaLinux 8.
Ọzọ, gaa na download page wee họrọ Linux 64bit ma ọ bụ 32bit. Nhọrọ, ị nwere ike iji iwu wget ka ibudata faịlụ.
Ozugbo ebudatara, mepee ọnụ ọnụ gị wee gaa na ndekọ ị budatara ebe nchekwa Foxit Reader. Ọ bụrụ na ị na-ebudata ozugbo site na saịtị na-awụgharị wget iwu, n'ọtụtụ oge, nke a ga-adị na ndekọ nbudata gị.
Na-esote, wepụ zip Archive na iwu na-esonụ.
Ị ga-edozi ikike maka faịlụ ewepụtara ka ọ na-agba ọsọ. Tọọ ikike na ndị a.
Iji wụnye Foxit nke ọma, ị ga-achọ gbanyụọ njikwa ohere ma ọ bụ nweta njehie ahụ "QXcbConnection: Enweghị ike ijikọ iji gosipụta: 0".
Ugbu a mebie iwu wụnye maka Foxit. Nke a ga-ebulite windo UI install.
Ọkachamara nwụnye UI mmapụta ga-apụta belụsọ ma ọ dị mkpa hapụ ụzọ nwụnye ndabara.
Ụzọ ndabara kwesịrị ịnakwere maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta ụzọ ọzọ, tọọ ya ebe a ugbu a.
Na-esote, ị ga-abịa na nkwekọrịta ikike, nabata ha ka ha gaa n'ihu nrụnye.
Mgbe obere oge gasịrị, a ga-etinye Foxit PDF Reader, ị ga-ahụ ọkwa yana nkwenye nke ụzọ nrụnye. Pịa Imecha ịpụ na installer.
Ekele, ị tinyela Foxit PDF Reader na AlmaLinux 8.
Na nrụnye zuru ezu, ị nwere ike ịgba ọsọ Foxit n'ụzọ dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ FoxitReader & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> Foxit Reader. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo ewepụtara ya, ị ga-enweta ngwa ngwa ka ịtọọ Foxit dị ka onye na-agụ PDF na-adịghị mma yana ịchụpụ ma ọ bụ dobe ozi nchetara maka ya, mee nhọrọ gị wee gaa n'ihu na ngwa ahụ.
Ọzọ, ị ga-abata na ihuenyo ọdịda ngwa PDF.
N'ime nkuzi a, ị budatala ma tinye Foxit PDF reader. Ọ bụ nnukwu nhọrọ maka ihe nlele AlmaLinux PDF nke ndabara. Foxit nwere ndekọ ndekọ dị mma nke ndozi ahụhụ, ndozi na nchekwa na kwesịrị ekwesị ịchọ onye ọ bụla na-emekọ ihe na faịlụ PDF.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, Foxit Reader Reader Mail igodo
Otu esi etinye Python 3.10 na AlmaLinux 8